Akwukwo ozi nke Blog nke ihe ngosi "Indian" - THE INDIAN FACE
Ndị nkesa na ndị na-ere ahịa nke ngwa mma na ngwa mma
Anyị ebidola ụzọ ngwa ahịa anyị maka ndị nkesa na ndị ahịa ya. Anyị bụ ndị na-ere ahịa na ndị na-eweta akwa, ngwa mma na ngwa mma ma kesaa ngwaahịa anyị n'ihe karịrị mba iri atọ. Azụ ahịa anyị n'ahịa rutere kọntinenti ise.
Edurne Pasaban na-eme ncheta afọ nke iri nke mmeri o meriri puku mmadụ iri na asatọ na asatọ
O meela afọ iri kemgbe anyị nụrụ n’ozi ọma niile etu esi Edurne Pasaban ọ na-azọ mmeri na-enweghị atụ. N’ọnwa Mee afọ 2010, onye ugwu pụrụ iche ga-arụzu ọrụ ya iji merie ugwu ndị kachasị elu na mbara ala, si otú a bụrụ nwanyị mbụ na akụkọ ntolite wee bulie puku mmadụ iri na anọ ahụ ugwu.
Michael Robinson: ochi diri onye ukwu
Ndi Britain ama ama onyụn̄ okụt ke Spain? Ọ dị ka ihe siri ike, mana Michael Robinson mere ka o kwe omume, ya na ihu ọchị na amara nke dọọrọ uche nke ndị egwuregwu egwuregwu niile ma mee ka anyị chọọ ịnụkwu arụmụka ya n'oge ezumike ya na olu okwu ndị Spenzeed nke Britain.
Onwere ndi chetara ya karia maka oru akuko ya, ndi ozo na echeta nnukwu ebumnuche o gbuuru dika ndi gbara ososo Preston North End, Manchester City, Liverpool ma obu CA Osasuna na otutu ndi ozo.
Álvaro Fernández Fiúza: onye agba osote ọta akara ụwa atọ
Álvaro Fiúza mụrụ na 1982 na Pontevedra. Ọ bụ onye canoeist ma kpọsara ya onye ọkpụkpọ ụwa atọ ugboro n'usoro marathon. Ọ malitere ọrụ ya na egwuregwu a mgbe ọ dị naanị afọ 11 na mgbe ọ gbasịrị mbọ ike na ọzụzụ ọ nwetara, ọ nwetara okpukpu abụọ nke European na World Marathon, ya na Emilio Merchán, […]
Frelete kacha mma dị na Ngụgụ nke Grandvalira
Edemede nke iri na otu nke ngụkọta ngụgụ nke ngụgụ nke ihe mmụọ mmụọ na-ewetara ndị na-anya ụgbọ elu kachasị mma n'oge oge snow na efe efe na ebe a na-eme njem Andorran nke Grandvalira. Snowpark El Tarter ga-abụ ọgbọ egwuregwu maka ngwụsị izu abụọ nke jumps dị egwu na egwu. Ihe omume a nwere […]
Ndị snow na-agba mmiri Spanish na-achọ ihe niile n'asọmpi Austrian World
Ndị nchekwa snow nke Spen na-achọ ihe niile n'asọmpi World Austrian Taa, ụbọchị 15 na 25 nke ọnwa a, Jenụwarị, egwuregwu bọọlụ Snow ga-eme n'ụlọ ọrụ dị na Kreischberg (Austria). N'ime ụbọchị iri nke asọmpi a, a ga-eme nnwale snowboardcross, halfpipe, slopstrong, SL yiri nke ukwu.
Alvaro Fiuza na Walter Bouzan bụ ndị nke abụọ na Oklahoma World Cup
Alvaro Fiuza na Walter Bouzan bụ ndị nke abụọ na Oklahoma World Cup Alvaro Fiuza na Walter Bouzan bụ ndị nke abụọ na Oklahoma World Canoeing Championship na ọnọdụ K2 Marathon. N'ebe a, anyị na-ahapụrụ gị akwụkwọ akụkọ niile nke Alvaro Fiuza dere.
Alvaro Fiuza tozuru oke igba nke ise nke Sella
Alvaro Fiuza meriri na Sella nwa ya nke ise The Indian Face TEAM Alvaro Fiuza nwetara mmeri nke ugboro ise nke Sella ya na Walter Bouzan onye otu ya. Ha emeriela taa, yana oge nke 1 elekere 6 na nkeji nke 43, mbipụta nke 78 nke Sella International Descent.